Jeneraal Muungaab oo Maanta Nairobi Kula Kulmay Hay’ado Caalami ah “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha G/banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Jeneral Xasan Maxamed Xuseen “muungaab” Ayaa Magaalada Nairobi Kulan kula qaatay hey.addo Caalami ah oo ay Kamid Yihiin UNPOS,WORLD BANK,USAID,UN-HABITAT, IOM iyo mas’uuliyiin ka tirsan safaaradda dowlada mareykanka ay ku leedahay magaalada Nairobi.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hay’adaha kala hadlay sidii loo dar dar galin lahaa howlaha mashaariicda horumarinta ee ka socda caasimadda soomaaliya ee Muqdisho.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa uga mahad celiyay hay’adda USAID kaalintii mugga lahayd oo ay ka qaadatay dib u dhiska xarumaha degmooyinka maamulka gobolka Banaadir.
“USAID wax badan ayey ka qabatay gobolka Banaadir waxna waa dhimanyihiin,laakiin waxaa xusid mudan wixii aan dalbano waa naloo keenaa”ayuu yiri Jeneraal Muungaab.
Ugu dambeyntii wuxuu duqa magaalada la kulmay mas’uuliyiin ka tirsan safaarada dowlada mareykanka ay ku leedahay magaalada Nairobi,isagoo kala hadlay sidii horey loogu sii wadi lahaa iskaashiga amniga dalka iyo horumarka dalka.
Madaxweynaha oo hambalyo u direy hoggaamiyaha cusub ee Nigeria